The Irrawaddy's Blog: အီဘိုလာတားဆီးရေးအတွက် လေဆိပ်တွေမှာ အဖျားတိုင်းစက်တပ်ဆင်
အီဘိုလာတားဆီးရေးအတွက် လေဆိပ်တွေမှာ အဖျားတိုင်းစက်တပ်ဆင်
ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါတခုလို့တင်စားပြောရမလိုဖြစ်နေတဲ့ အီဘိုလာ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စောင့်ကြည့်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကို မြန်မာအစိုးရ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း အရှိန်အဟုန်နဲ့လုပ်ဆောင်လာနေတယ် လို့ Myanmar CDC ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကတဆင့် ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တင်ပြလာပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- Myanmar CDC
အထူးသဖြင့်တော့ လေဆိပ်တွေမှာ Infra red Fever Screening System (Thermal Scan) စက်ကိရိယာတွေ တပ်ဆင်မှုလုပ်တာမှာ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန် တို့မှာ စက်တပ်မှု အသစ် ၁ ခုစီ ထပ်တိုးပြီး မန္တလေး၊ ညောင်ဦးလေဆိပ်တွေမှာလည်း စက်အသစ် တခုစီ အသစ် တပ်ဆင်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့်အခုဆို အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး အကဲဖြတ်စနစ်နဲ့ အဖျားတိုင်းတာ ကိရိယာစက်တွေဟာ
နေပြည်တော် လေဆိပ်မှာ စက် ၂ ခု၊ ရန်ကုန် လေဆိပ်မှာ ၂ ခု၊ မန္တလေးလေဆိပ်မှာ ၁ ခု၊ ညောင်ဦး လေ ဆိပ် မှာ ၁ ခုတို့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို စက်ကိရိယာတွေ ထားရှိ စောင့်ကြည့်မှုတွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ အလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ထိ ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အီဘိုလာရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ မရှိဘူးလို့လည်း အသိပေးကြေညာထားပါတယ်။
Posted in: Eaint Than Zin , Health , News , ကျန်းမာရေး
အီဘိုလာ Vs ရန်ကုန်လေဆိပ် (သတိမမူဂူမမြင်)
ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ ထိခိုက် စေဖို့ရည် ရွယ်တာ မဟုတ်ပါဘူး
ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တဲ့အရာတခုကိုယ်စေတနာ သန့်သန့်နဲ့်
့မဖြစ်သင့်တာတွေ မဖြစ် ရ အောင် သက်ဆိုင် သူတွေ အချိန်မှီပြုပြင် နိုင် အောင်
ဥဏ်လေးတထွာတမိုက်နဲ့ကိုယ့်သိသ လောက် လေးအကြံပေးတာပါ
အခုတ လော နာမည်ကြီးနေတဲ့အီဘိုလာဆိုတဲ့ကုရာနတ်ထိဆေးမရှီAIDSထက်ဆိုးတဲ့ရောဂါကို
လူတိုင်းမဟုတ်တောင် အနည်းဆုံးFBသုံးတဲ့လူတိုင်းသိမယ် လို့ယူဆပါတယ်
အဲသည့်ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့စစ်ဆေးဖို့နိုင် ငံတော် တော်များများဟာ
လေဆိပ်,ွရေဆိပ် ကုန်းတွင်းနယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ဂိတ်တွေမှာ Ebola Screening ကို
ရန်ကုန်လေဆိပ် ပြည်ပ ဆိုက်ရောက်ဆောင် မှာတတ်ဆင် ထားတာ တွေ့ရတယ်
ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ပြည်ပ ဆိုက်ရောက်အ ပေါ်ထပ်က နေ
မြေညီထပ်ကို သွားမယ်ဆို လှေကားသုံးခုရှီတယ်ဗျ
ရိုးရိုးလှေကားနဲ့ယှဉ်လျှက် Stair Lift(စက်လှေကား)ကိုလူတိုင်းနည်းပါးသတိထားမိပြီးအသုံးများပေးမဲ့
အပေါ်ထက်လှေကားနားမ ရောက်ခင် ဘယ်ဘက်မှာရှီတဲ့ အ ပေါ်ထပ်က နေဆင်းရင်
အောက်ထပ်မြေညီလူဝန်မှူကြီးကြပ်ရေးကောင် တာ ရှေ့ကိုတန်းရောက်တဲ့
Elevator Lift (ဓါတ်လှေကား)ကိုတော်တော်များများသတိမထားမိကြဘူး
ဲမြေသျှိုးမိုးပြံ ပြီး လေယဉ်ပေါ်က ကိုယ့်ရှေ့ကဆင်းသွားတဲ့လူအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ပြီး
တခါထဲ့လူဝန်မှူကြီးကြပ်ရေးကောင် တာ ရှေ့ကိုဘွားခနဲရောက်သွားတယ်
ပြသနာအစစ်က အဲ့သည့်မှာစ တွေ့တာဘဲ*********
အဲ့သည်လူဝင် မှူကြီးကြပ်ရေးကောင် တာ ရှေ့တန်းရောက်တဲ့ *******
ဓါတ်လှေကားရဲ့ရှေ့မှာ ဘာ အ စောင့်အကြပ် ဘာစစ်ဆေးရေးစက်မှမရှီတာဘဲ*******
တကယ်ဆို အ ပေါ်က နေ အောက် အဆင်းကိုအဲ့သည့်ဓါတ်လှေကားကိုလုံးဝပေးမသုံးသင့်ပါဘူး
လေဆိပ်ဝန်ထမ်းတွေအပါအ၀င် ဘယ်လိုပုဂိုလ်မျိုးကိုမှဖြတ်သန်းအသုံးပြုခွင့်မ ပေးသင့်ပါဘူး
မြန်မာပြည်ကိုလာရောက်တဲ့ခရီးသွားတော်တော်များများဟာ စကာင်္ပူ, ဘန်ကောက်, ဒူဘိုင်း, နရီတာ, KLအစရှီတဲ့လုံခြုံရေးအဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့လေဆိပ်တွေကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်
အလုံးစုံ်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့စစ်ဆေးရေးနည်းပညာဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာမ ပေါ်သေ်း ပါဘူး
ကျွန်တော်သိသ လောက်ဆိုရင် သည်ရောဂါကူးဆက်ပြန့်ပွားမှူ့နှုန်းကအရမ်းမြန်ပါတယ်
မိမိရဲ့ကိုယ်ခံအားပေါ်မူတည်ာပြီးကူးစက်နိုင် ပါတယ် ကူးစက်သွားပြီဆိုရင်တော့
အခုချိန်ထိ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသ နိုင် မယ့်ဆေးမ ပေါ်သေးပါဘူး
လက်ထဲကအထုတ်လေးတွေ ခဏချပြီး virus scanner ရှေ့ကို
အလိုက်တသိ ဘယ်သူတဦးတ ယောက် ရဲ့တိုက်တွန်းသွေးဆောာင် ဖျားယောင်ခြင်းမရှီဘဲ့ 
အခုချိန်ထိ ကျွန်တော်အ တွေးထဲ
ရောဂါသည်တ ယောက်ယောက် ဒါမှမဟုတ်
လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင် ရင်း မိမိကိုယ်တိုင်မသိရှီလိုက်ဘဲ
ဒါမှမဟုတ် မြန်မာပြည်ထဲမှာရောဂါဖြန့်ဝေဖို့ရည်ရွယ်ချက် ရှီရှီ ၀င် လာတဲ့
အသေခံအကြမ်းဖက်သမားတ ယောက်ယောက် ဟာအဲ့သည်လမ်းကြောင်းအဲ့သည့်ဓါတ်လှေကားကိုအသုံးပြုပြီး
Virus Scanner ကိုရှောင် ကွင်းပြီးမြန်မာပြည်ထဲကိုဝင် လာခဲ့ရင်?????
screening မှာ တာဝန်ကျ နေ တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ဟာ basic ppe ဖြစ် တဲ့ Mask, Glove နဲSafety goggles လေးတောင် အသုံးပြုထားတာ မ တွေ့ရပါဘူး
ဒါ လဲ စိုးရိမ် စရာ ပါ ဘဲ တကယ် လိုများ ရောဂါသည် တ ယောက် ယောက် ခရီးသည် ထဲမှာ ပါလာခဲ့ရင် လုံလောက် တဲ့အကာ ကွယ်မရှီဘဲသူတို့ဘယ်လိုတားစီးမလဲ?
သူတို့အ နေ နဲ့တားစီးဖို့မလိုဘူး Emergency Respond Team ကိုယ် တားစီးဖို့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်
ဘယ်နယ်မိနစ် အတွင်းမှာတုန်းပြန်နိုင် မလဲ????